Shirka wada tashiga ahaa ee lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntlnad oo dibu dhac ku yimid. | Moment Union Somali Diaspora
Shirka wada tashiga ahaa ee lagu balansanaa inuu maanta ka furmo magaalada Garowe ee xaruntav maamul goboleedka Puntlnad ayaa dibu dhac ku yimid,kadib amrkii khilaaf xooggaan uu hareeyay xildhibaanada Baarlamanka KMG ah ee Soomaaliya.
In kastoo aan la shaacin sababaha keenay dib u dhaaca ku yuimid shirka wadatashiga ah oo wejigiisii koowaad uu ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa wararka soo baxaya ee la xiriira dibudhaca kulan loo sababeynayaa mashaakilka cusub ee haatan ka dhax bilowday .
Xildhibaanada Barlamaanka Soomaaliya, oo kulan ay yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ka sheegay inay xilkii ka qaadeen gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Maalmihii u danbeeyay ayaa waxaa Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ka socotay qabanqaabada iyo u diyaar garowga kulanka wadatashiga ah ee hormuudka ay ka tahay QM ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in kulanka dib loo dhigay mudo aan la cayimin hase yeshee wararka ayaa intaasi ku daraya in ergagdii loogu talo galay inay ka qeyb galaan shirkaasi la casuumay.
Ciidamada nabad-galyada maamul gobolleedka Puntland ayaa ku howlan adkeynta nabad-galyada magaalada, maadaama ay halkaa gaarayaan xubno ka tirsan ergada lagu wado in ay shirkaasi ka qeyb-galaan.
Dhinaca kale shirka magaalada Garoowe ayaa waxaa hareeyay buuq siyaasadeed cusub oo hadda uun ka dhax bilaawday dowladda KMG, iyadoo maalintii shalay la arkayay xildhibaannada baarlamanka oo ku dhax feertamaya gudaha xarunta gollaha shacab-ka, waxaana dhici karta in shirkaasi muddo dheer dib u dhaco ilaa la saxo khilaafka hadda ka dhax oogan Baarlamaanka Soomaaliya.